Amasu Wokuthengisa aguquka kanjani nge-Social Media
I-Paradigm Yokuthengisa Eguqukayo
Lwesibili, Disemba 29, 2009 NgoLwesine, Juni 18, 2015 Douglas Karr
Umcimbi olandelayo wama-Techmakers uzoba okhethekile! Ngihlala ngibonga njalo ngethuba lokukhuluma futhi Abakhi bezobuchwepheshe banikeza izethameli ezihlukile. Abenzi bezobuchwepheshe ikakhulukazi ochwepheshe bezobuchwepheshe abavala igebe phakathi kokuphela kokuphela nabantu bangaphambili. Kukhona nokuhlanganiswa okuhle kwamabhizinisi amancane namakhulu abekhona kule micimbi.
Umcimbi olandelayo uzoba ngo- Indawo yokuphekela utshwala yaseScotty edolobheni ngoLwesibili, Januwari 5 ngo-5: 30 PM. Ngiyethemba ungaba khona! Sikhule safinyelela ezingeni lapho manje sithatha womabili amagumbi wobumfihlo kwaScotty's!
Ngizobe ngikhuluma ku ukushintsha umbono wokuthengisa. Abathengisi abangabusebenzisi ubuchwepheshe bathatha isihlalo sangemuva impela kulabo abanaso futhi igebe liyakhula. Iminyango yokuthengisa ephumayo engafakwanga ku-inthanethi ifaka ibhizinisi labo engcupheni enkulu.
Okusenkingeni abathengi namabhizinisi manje banakho okumangalisayo amathuluzi namanethiwekhi angatholakala kubo ku-intanethi ukusiza ukubafundisa ngezinqumo zokuthenga nezebhizinisi. Kukhona amanethiwekhi agxilwe nemiphakathi online, amagama angukhiye wezinjini zokusesha, namabhulogi ahlinzeka abathengi namabhizinisi ngethoni yolwazi ngaphambi bahlala beshayela noma bekhuluma nabamele abathengisi bakho.
Lapho kufika ithemba kusayithi lakho, ocingweni, noma emnyango wakho, kwesinye isikhathi baba banolwazi oluningi ngemikhiqizo yakho, izinsizakalo, amandla, ubuthakathaka, nebhizinisi lilonke kunalokho ongathanda babe yikho.
Esikhathini esedlule, umthengisi wakho ubengumsele phakathi kwethemba nokuthengisa. Lokhu akuselona iqiniso. Manje imininingwane etholakala ngokusobala ku-inthanethi ngumsele. Ngenxa yalokhu, uma inkampani yakho ifuna ukuba khona lapho abantu besezinyathelweni ezibucayi ekwenzeni izinqumo, abantu abathengisayo kumele babe ku-inthanethi lapho lezo zinqumo zenzeka khona.
Ukudayela amadola akuseyona ukuphela kwendlela yokuthengisa ekhulayo. Angimelene nokushaya ucingo oluphumayo, kepha uma ufuna imiphumela ethuthukisiwe yezindleko zakho zokuthengisa, udinga ukulinganisela izingcingo eziphumayo nemisebenzi yokuxhumana eku-inthanethi naku-inthanethi. Ukulingana kwazo zonke lezi zenzo kuzohlinzeka inkampani yakho ngokuvezwa okuthe xaxa, igunya… futhi ekugcineni, nethemba. Esikhathini eside, uzoba nepayipi lokuthengisa elinempilo kakhulu.
Okuhle kunakho konke, lezi zindlela zingalinganiswa ngokunembile. Singalinganisa ithrafikhi nokuguqulwa kusuka kumasayithi wokubuyekeza, izinkomba ze-inthanethi, amasayithi abhekisayo namabhulogi, ukuxhumana nomphakathi okufana ne-LinkedIn ne-Facebook, kanye nezindlela zokuxhumana nabantu ezifana ne-Twitter. Lawa maqhinga adinga umfutho futhi… ukutshala amasonto ambalwa kucebo eliku-inthanethi ngeke kusize inkampani yakho - kepha ukutshala imali ngonyaka kunamandla okukhulisa ibhizinisi lakho ngokushesha kunalokho obukucabanga.
Ngiyethemba ukukubona emcimbini ukuze uqhubeke uxoxe ngamasu namathuluzi ibhizinisi lakho elingawasebenzisa ukuze wakhe lawa masu amasha wokuthengisa.
Tags: umbandela wokuthengisaamasu okuthengisaabathengisiumthengisiabenzi bezobuchwepheshe
Hamba kahleI-Hootsuite, Sawubona Futhi Twitterfeed
UNGAYENZI Kanjani Izinqumo Zonyaka Omusha Zisebenze